people Nepal » कहाँ छन् प्रमुख दलका शिर्ष नेता ? कहाँ छन् प्रमुख दलका शिर्ष नेता ? – people Nepal
कहाँ छन् प्रमुख दलका शिर्ष नेता ?
काठमाडौं, १८ मंसिर । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको दोस्रो चरणमा हुन लागेको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले सोमबार मात्रै चुनावी प्रचार गर्न पाउनेछन् । सोमबार मध्यरातबाट प्रचार गर्न नपाउने भएका कारण निर्वाचन लडेका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू आफ्नै क्षेत्रका कार्यक्रममा सहभागी हुँदै छन् ।